Mpanamboatra PH & ORP Meter indostrialy - Orinasa & mpamatsy metatra PHP ORP
Indostria pH & ORP Meter
PHG-3081 indostrialy pH metatra no mpamorona zavamaniry miorina amin'ny microprocessor, miaraka amin'ny fampisehoana anglisy, fandidiana menio, fahaiza-miasa avo lenta, fahombiazana avo lenta, fahaiza-miaina tontolo iainana ary toetra hafa. Izy io dia fitaovana fanaraha-maso mitohy an-tserasera an-tserasera, mifangaro amin'ny sensor sy ny metatra faharoa. Azo ampiarahina amin'ny elektroda mitambatra telo na kompositera roa hihaona amin'ny tranonkala isan-karazany. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanaraha-maso tsy tapaka ny lanjan'ny PH ho an'ny herin'ny hafanana, zezika simika, metallurgy, fiarovana ny tontolo iainana, fanafody, biokimika, sakafo sy rano ary vahaolana hafa.
PHG-2091 indostrialy PH metatra an-tserasera dia metatra famaritana ny fandrefesana ny sandan'ny PH ny vahaolana. Miaraka amin'ny lahasa feno, fahombiazana milamina, fandidiana tsotra sy tombony hafa, fitaovana tsara indrindra izy ireo amin'ny fandrefesana indostrialy sy ny fifehezana ny sandan'ny PH. Ny electrodes PH isan-karazany dia azo ampiasaina amin'ny metatra PH indostrialy PHG-2091 an-tserasera.
Ny fitaovana dia ampiasaina amin'ny fandrefesana indostrialy ny mari-pana sy ny PH / ORP, toy ny fitsaboana rano maloto, fanaraha-maso ny tontolo iainana, fanamasinana, fivarotam-panafody, famokarana fambolena, sns.
ORP-2096 Meteritra fampihenana oksidasiana indostrialy (ORP) Meter
ORP-2096 Industrial Online ORP Meter dia metatra famaritana handrefesana ny soatoavina ORP. Miaraka amin'ny lahasa feno, fahombiazana milamina, fandidiana tsotra sy tombony hafa, izy ireo dia fitaovana tsara indrindra amin'ny fandrefesana indostrialy sy ny fifehezana ny sandan'ny ORP. Ny elektroda ORP isan-karazany dia azo ampiasaina amin'ny andian-tsarimihetsika ORP-2096.